Ulaha ugu fiican dunta soo saaraha iyo Warshad | Gimarpol
Ulaha layliga dunta waxaa badanaa loo isticmaalaa godka qarxinta, godka ilaaliyaha, xoojinta buuraha, barroosinka iyo godadka kale ee injineernimada ee miinooyinka, dhagaxa, jidadka sare, jidadka tareenka iyo wixii la mid ah.
QAYBTA # Dhererka miisaanka
MM FT / IN KG LB
T45 1830-6095 6-20 ′ 21.6-89.4 47.6-197
R32 2400-6400 7'11 ″ -21 ′ 15.3-50.3 33.7-110.8
R38 2400-6400 7'11 ″ -21 ′ 15.3-50.3 33.7-110.8
Ulaha layliga dunta waxaa badanaa loo isticmaalaa godka qarxinta, godka ilaaliyaha, xoojinta buuraha, barroosinka iyo godadka kale ee injineernimada ee miinooyinka, dhagaxa, jidadka sare, jidadka tareenka iyo wixii la mid ah. Waxay leedahay nolol adeeg dheer. iyo ulaha daloolka ayaa sidoo kale la kulmay culeys foorarsi sare ah, iyadoo u wareejineysa tamarta garaaca ka daloolida dhagaxa illaa qoditaanka qoditaanka ka dibna dhagaxa.
Qeexitaan loogu talagalay Daloolinta Qalabka loogu talagalay hawo-haadka, aaladaha qodidda dubbe sare
Waxyaabaha Birta Daawaha Dhismaha
Codsiga Tunnel, engeeg, Macdanta, Quarrying, Piling, warshadaha-ceelka biyaha, iyo kaabayaasha dhismaha Dhismaha Qodista iyo Bolting, Bench Drilling, Production drilling, Long god drilling
Nooca dunta H22, R25, R28, R32, R35, R38, T38, T45, T51, GT60, ST58, ST68
Nooca Rod Udhigga Extension, Udubka kala-baxa ah, MF usha, MF ul Drifter, Tusaha tuubada, Ulaha layliga la duubay, Daloolin isku dhafan
Nooca jidhka Nooca laba-geesoodka ah, nooca wareega
Length Rod 260mm ~ 6400mm
Naqshadaynta Custom Mawduuc, Dhexroor, Dherer, Midab ayaa loo habeyn karaa
Ulaha layliga muquuninta waxay kuxiran yihiin dhamaadka ilaa dhamaadka afar ama lix jiho, adoo adeegsanaya biinka guga qufulka tooska ah ama biinanka wareega, biinanka toosan, biinanka U-qaabeeya, iyo biinanka wareega ee wareega u eg ee isku xirka iyo dejinta, oo si dhaqso leh isugu xirmi kara. Way ku habboon tahay oo dhakhso badan tahay in la isku xiro, waxay leedahay astaamaha miisaanka fudud, dabacsanaanta sare, mana sahlana in la leexiyo. Marka la barbar dhigo tuubooyin kale oo daloolin ah, waxay leedahay faa iidooyinka muuqda ee hawlgalka habboon iyo xawaaraha qodista degdegga ah, sidaa darteed waxaa loogu yeeraa dhuumaha qallalan ee muquuninta degdegga ah.
Ulaha layliga muquuninta waxaa loo isticmaalaa in lagu tixraaco afar ulood oo dalool ah Φ42mm, ,69mm, -76mm, iyo 89mm. Iibkeenu waxaa loo taagay sidii dhamaan ulaha qoditaanka ee iskuxirnaanta laba jibbaaran ama laba geesoodka ah, iyo macno balaaran, waxa kale oo kujira ulaha kale ee daloolinta isku xidhka degdega ah; Sida dhuumaha qodista sahaminta biyaha, dhuumaha qodista dheecaanka gaaska, hubi tuubooyinka layliga, tubooyinka layliga rattan, cabirka baaxada weyn iyo juquraafi ahaanta
Ilkaha silsiladda isku xidhka dunta ah ayaa inta badan loo isticmaalaa layliyo dhagaxda hidde ah (ama laylisyada dhagaxa oof-wareenka ah) iyo ulaha layliga ee (Haydaroolida hawada). Iyada oo loo marayo noocyo kala duwan oo dun ah iyo ulaha daloolinta, howlaha qodista ayaa lagu fuliyaa. Dhexroorka wax yaroo layliga waxaa lagu go'aamiyaa ￠ 32- ￠ 203mm, oo inta badan loo adeegsado macdanta dhulka hoostiisa, miinooyinka godadka furan, furitaanka foornada qaraxu ka soo baxo ee birta laga sameeyo iyo meelaha kale. Xawaare degdeg ah iyo shiidi ku habboon.
Qalabka laydhka lagu xidho: (R22, R25, R28, R32, R38, T38, T45, T51 thread)
Boodh yar oo xadhig ah (daloolin), nooca fidsan, nooca aasaasiga ah ee cufan, nooca soo noqoshada fudud, nooca celceliska isku-dhafan ee fudud (dhexroor 51127mm)
Gacanta isku xirka iyo yaraynta isku xiraha: (R22, R25, R28, R32, R38, T38, T45, T51)
Butt shank: (R32, R38, T38, T45, T51 thread, iwm), waxaa lala jaan qaadi karaa Atlas Copco, Furukawa, Ingersoll Rand iyo shirkado shisheeye oo caan ah.
Qodida qoditaanka: R25, R28, R32, R38, T38, T45, dunta T51 iyo qeexitaano kale oo ulaha layliga ah iyo dhaddig oo lab ah
Hore: Layli dhagaxa oof-wareenka ah
Xiga: Dhuxulada miinooyinka
Qodo biibiile dunta dunta
Dhuunta dhuunta dhuxusha